OPDOn Woyyaaneen Oromoo irratti woraana labsuu hubachuu fi qabsoo eegalame milkeessuuf waa gumaachuu qabdi - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured OPDOn Woyyaaneen Oromoo irratti woraana labsuu hubachuu fi qabsoo eegalame milkeessuuf waa...
OPDOn Woyyaaneen Oromoo irratti woraana labsuu hubachuu fi qabsoo eegalame milkeessuuf waa gumaachuu qabdi
OPDO hinjilbiiffannetti kooraan akka hin fe'amne baranii, bulchiinsi Oromiyaa fi OPDOn ajaja TPLF irra dhufu fula isiitti darbuu danda'uu qabu.
Woggoottan 25f rakkoolee heddutu Oormiyaa keessatti wolirratti kuufame: ummanni ni dhiitame, qabeenni ni samame, OPDO fi bulchiinsi Oromiyaa ni tuffatame, sirni federaalaa jedhamu daangaan maletti sarbame. Badiin ganna 25f nurratti raawwatame akkasitti aarsee Oromoo tokkummaan daanditti baase. Dhugaan kuni OPDO, Abbaaanduulaa fi Mukaataariinis dabalatee, waan dhokatee miti.
Erga Sadaasaa kaasee ummata mirga isaaf dubbatee fi baadii irratti raawwatamaa ture daanditti bayuun balaaleffate kan mootummaan ajjeesaa fi taankiin macarassaa ture. Sa’aa kanatti, yeroo bonaatti, Oromiyaa kan dhoqqeesse rooba osoo hin taane dhiigaa fi imimmaan osoo wolirraa hin citin baatii 4f dhangala’eedha.
Rakkoo kana keessaa Oromiyaan kan bayuu dandeettu akkamitti? Qawween, olollii fi doorsisaan gaafii Oromootiif deebii waaree miti isa yeroo gabaabaa akka hin laanne imalli ganna 25 akka gaaritti nu nutti agarsiisee jira. Kana booda falli jiru tokko qofa: gaafii ummataaf deebii karaa nagaa kennuu. Daandiin qawwee kan itti nu geessu dhiiga Oromoo daran dhangalaasuu fi umrii mootummaa angotti silmii ta’ee gabaabsuu qofa. Itti gafatamummaa jalaa dhessuudhaa fi saba ukkaamsuudhaaf sochii Oromootti maqaa garagaraa baasuun Oromoo daran daallansiisuu fi gara daandiitti baasuun alatti faaydaan biraa inni qabaatu sa’aa kanatti tokko hin jiraatu. Wobii jireennaa mootummaan kuni kan argatu yoo dhugaa, hadhooftus, simate qofa.
OPDO fi angawoonni isaanii gurguddoon kan ummanni gaafataa jiru gaafii haqaa fi kan miseensonni OPDOs osoo hin hafin yeroo addaddatti kaasaa turan ta’uu bareechanii beeku. Mootummaan garuu bulchiinsa naannoo fi OPDO tuffatuudhaan magaalaa fi baadiyaa hunda keessa burraaqaa Oromoo adamsaa fi dhiiga isaa dhangalaasaa jira; bifa firaa mitii nyaaphas rifachiiseen. Yeroo kuni hundi ta’u OPDOn fundura mootummaa dhaabachuu mitii waa xiqqoollee dubbachuu hin dandeenne. Dubbattus worri TPLF akka isaan hin dhageenne ifa. Dubbachuun isaanii Oromoof faaydaa cimaa qaba, garuu. Qilleensi gaariin gamasii bubbisu nu onnachiisa. Tokkummaa qabsaayotaas daran cimsa. Qarqara dhaabatanii ilaalutti lafti bari’uu miseensonni OPDO hubachuu qaban. Dhiiga dhangalaa jiru dhaabsisuuf yeroo kamuu caalatti angawoota OPDO gurguddoo irraa hangaa lagaatti tankaarfii gurguddatu eegama.
Poolisiin Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti ummata nagaa irratti dhukaasuu diduun gocha gootummaa fi isa seenaan hin daganneedha. Tankaarfii fudhataniif gatiin hanga ammaatti kaffalan hedduu miti. Gara funduraattis qerroon Oromoo waardiyaa isaaniiti. Harki harka dhiqa! Bulchiinsa Oromiyaa fi angawoota OPDO ol’aanoo irraas gootumaa akkanaati kan Oromoon gaafatuu fi arguuf amuummatu. OPDOn ummata cinaa dhaabachuudhaan itti fayyadamti taanaan, haalli amma uumame kan OPDOn cubbuu ganna 25 itti miicatuu fi seenaa gaarii itti galmeeffattudha. Mootummaa abbaa-irree fundura gootummaan dhaabachuun rakkisaa ta’uu isaa hundi beeka. OPDOn, garuu, karaa hedduun (iccitii baasuun, diina karaa balleessuun, ajaja dabarsuu diduun) ummata keenna du’a jalaa baraaruu fi kufaatii mootummaa kanaa saffisuu ni dandeetti. Lubbuun hudduun akka nama hin baane OPDOn hubachuu fi milkaayina qabsoo kanaaf waa gumaachuu qabdi!
Previous articleOromoon osoo humna Agaaziin ajjeefamuu fi taankiin irratti bobbaafamu qabsoo isaa asiin gayuu Woyyaaneen hubachuu qabdi
Next articleBalaaleffannaan gocha faashistii Woyyaanee biyyoota addaddaa keessatti cimee itti fufee jira